Miseho amin’ny distrika 10: 22 ny tranga niseho, dimy ny matin’ny pesta | NewsMada
Miseho amin’ny distrika 10: 22 ny tranga niseho, dimy ny matin’ny pesta
Hatramin’ny alatsinainy lasa teo, dimy ny olona matin’ny aretina pesta, ny efatra efa voamarina mihitsy fa pesta. Tao amin’ny distrikan’Ambalavao ny iray, tany Miarinarivo ny roa ary ny fahefatra farany, tany Ankazobe. Ny tranga fahadimy, mbola tao Ambalavao ihany fa tsy mbola voamarina kosa ho matin’ny pesta, araka ny vaovao nampitain’ny minisiteran’ny Fahasalamana, omaly. 22 ny trangana fanahiana pesta nanomboka ny fiandohan’ny volana aogositra no ho mankaty: ny 16 amin’ireo, mbola velona avokoa. Ankoatra ny distrika valo voalaza fa nitrangan’ny aretina, nahitana fanahiana koa teto Antananarivo Renivohitra sy Arivonimamo ary Ambatolampy.
Nampahafantatra ny minisiteran’ny Fahasalamana fa efa miasa andro sy alina ny laharana maitso 910 ahazoana toromarika na torohevitra ho an’ireo mila izany. Ampahafantarina amin’ny tambajotra sosialy “facebook” koa ao amin’ny pejin’ny mnisitera ny fivoaran’ny trangana pesta ary azon’ny daholobe tsidihina hatrany.
Nanambara ny minisiteran’ny Fahasalamana fa nohamaivanina ny fitsaboana satria novana mihitsy mba hahatody hatramin’ny farany ny marary rehetra. Efa napetraka eny amin’ny distrika nitrangana pesta koa tamin’ny taona 2017 ny fitaovana “boite de cartman” sady hisamborana ny voalavo no mamono miaraka ny voalavo sy ny parasy entiny. Manampy ireo ny tahirim-panafody itsaboana ny pesta raha miseho ny valanaretina. Isan-taona, miseho manomboka ny volana aogositra hatramin’ny avrily ny aretina pesta.
Mampanahy ny olona eto an-dRenivohitra ny fivangongoan’ny fako eny amin’ny toby, indrindra, efa nahitana fanahiana pesta iray eto, araka ny vaovaon’ny minisitera.